Service ကို - မိုက်ကရိုဖုန်း optoelectronics Co. , Ltd မှ
LED HIGH ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဖြစ်ရပ်မှန်
LED လှေမျးမိုးဘေး LIGHT ဖြစ်ရပ်မှန်
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း LIGHT ဖြစ်ရပ်မှန်
LED ကို Shoebox အလင်း
ကို C စီးရီးပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ပင်လယ်အော်အလင်း
: D စီးရီးပန်းကန်ပြားပျံအမြင့်ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
အီးစီးရီးပန်းကန်ပြားပျံ highbay အလင်း
L ကိုစီးရီးပန်းကန်ပြားပျံ Highbay အလင်း
M ကစီးရီးပန်းကန်ပြားပျံ Highbay အလင်း
LED ကိုအမှတ်တရ pack ကိုအလင်း
LED ကို Module အလင်း
B ကစီးရီး Led ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်း
ကို C စီးရီး Led ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလင်း
အဘယ်အရာကိုရပ်တည် LED သနည်း?
LED Light-emitting diode အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အယ်လ်အီးဒီအလွန်ကြာရှည်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်မှတ်သားလောက်ရှိပါတယ်။ အတော်များများကအယ်လ်အီးဒီအထိ 50000 နာရီတစ် rated ဘဝကိုရှိသည်။ ဒါကပုံမှန်ဟေလိုဂျင်ထက် 20-25 ကြိမ်ရှည်ပုံမှန်အက်ဒီဆင်တီထွင်ထက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50 ကြိမ်ရှည်များနှင့်ပုံမှန် CFL ထက် 8-10 ကြိမ်နိုင်တော့ပါ။ 12 နာရီတစ်ရက်ကိုသုံး, တစ်ဦး 50000 မီးသီးထက်ပိုမို 11 နှစ်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ 8 နာရီတစ်ရက်ကိုအသုံးပြုပါက 17 နှစ်ကြာရှည်မည်!
သူတို့ကလုနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးနိုင်တယ်။ LED အစားထိုးပြီးသားများဖြစ်သော A-ပုံသဏ္ဍာန်, Par ရောငျပွ, MR ရောငျပွ, အလှဆင်, undercabinet နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်မီးသီးအမျိုးအစားများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ dimmers, များစွာသောမီးသီးကိုထောက်ပံ့သောအထူးသဖြင့်အလင်းမှိန်ခြင်းစနစ်များပေါ်တွင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကစမ်းသပ် Compatibility ကိုမှပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်အယ်လ်အီးဒီစမ်းသပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
LED ကိုမှ switching ၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ?
LED ကိုမှ switching ၏အားသာချက်များကိုမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ , အယ်လ်အီးဒီသည်အခြားမီးသီးထက်အများကြီးလျော့နည်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုနိုင်သည်အလွန်ရှည်လျားသော rated ဘဝတွေကိုရှိသည်, အနည်းငယ်သာအပူထုတ်လုပ်ရန်, ခရမ်းလွန်ထုတ်လွှတ်မှုသို့မဟုတ်အနီအောက်ရောင်ခြည်, အဘယ်သူမျှမပြဒါးဆံ့, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်တုန်ခါမှုမှခံနိုင်ရည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ပါဘူး: ဒီနေရာမှာပဲအချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ကြ၏ အလွန်ချမ်းအေး enviroments မှာ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို LED ၏အားသာချက်များအဘို့,
LED နေဆဲနည်းပညာအသစ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အရည်အသွေးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်နေဆဲမြင့်မားသည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထံမှသိသိသာသာချရောက်လာပြီနှင့်စျေးနှုန်းများကို drop ဆက်လက်မျှော်လင့်ရသည်။ အယ်လ်အီးဒီအပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိမရှိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကတက်-ရှေ့ကုန်ကျစရိတ်များအပြင်တစ်ဦးမီးသီးလုပ်ကိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာကြည့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ LED မီးတစ်ဦးသည် switch ထဲမှာသဘောပေါက်စွမ်းအင်ချွေတာအပိုတက်-ရှေ့ကုန်ကျစရိတ်မကြာခဏမဟုတ်ဘဲအလျင်အမြန်ပြန် paid သည်, သင်မီးသီးများ၏ဘဝကျော်ပိုက်ဆံချွေတာတက်လေလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: တစ်ပတ်ကို 10 နာရီပေါ်အလင်းရှိစေခြင်းငှါသူတစ်ဦးလူနေအိမ်ဖောက်သည်များအတွက် n ယင်း payback 10 နှစ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ပတ်ကို 90-100 နာရီအလင်းအိမ်ကိုမီးရှို့သူတစ်ဦးလက်လီသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင် client ကိုထက်နည်း 18 လဖြစ်မယ့် $ 70 နဲ့ LED Par အပေါ်သူတို့ရဲ့ payback တွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်။ LED ကိုသင်တို့အဘို့အမှန်သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ payback ခန့်မှန်းချက်မှာကြည့်တာကိုကျိန်းသေတစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
LED တစ်ဦး $ 10 နဲ့ LED တစ်ဦး $ 50 အကြားမည်သည့်ခြားနားချက်ကိုတကယ်ရှိပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ အယ်လ်အီးဒီစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်နှင့်အရည်အသွေးအမှန်တကယ်ကိစ္စရပ်များရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်အလင်း output ကိုပေးဖို့နဲ့ LED ဘို့အလို့ငှာခုနှစ်, အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးနောက်ဆုံးမှ built ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်ထုတ်ကုန်နောက်ကွယ်မှရပ်နေမည်ယုံကြည်မှုနေတဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်ထံမှဝယ်ယူရန်အမြဲကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါပဲ။ သင်အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့်မည်သို့စျေးနှုန်းသက်သာစွာလုပ်အယ်လ်အီးဒီထိပ်တန်းအရည်အသွေးထုတ်ကုန်ဆန့်ကျင်တက်သီးနှံများ, လိုပါက
တစ်ဦးနဲ့ LED ငါ၏အလက်ရှိမီးသီးအစားထိုးရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အလင်းထုတ်လုပ်သွားသလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်, အများဆုံး application များအတွက်။ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း LED ထုတ်ကုန်ယခုယုံကြည်စိတ်ချရသောတက် 100 watts က၏အက်ဒီဆင်တီထွင် equivalents အစားထိုးနေကြပြီး, အထူးထုတ်ကုန်ပင်မြင့်မား wattages အစားထိုးရရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအသှေးကိုကုန်ပစ္စည်းဝယ်လျှင်, အလငျးကိုရညျအသှေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် Rendering ညွှန်းကိန်း (CRI) ယေဘုယျအားဖြင့် 1-100 နေစကေးအပေါ်အလင်းအရည်အသွေးကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။ အများစုကအယ်လ်အီးဒီကအနည်းဆုံး 80 တစ် CRI အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်, မြားစှာသော 90 နှင့်အထက် rated နေကြသည်။
အယ်လ်အီးဒီကအရမ်းအစိမ်းရောင်ရှိကြသည်။ စတင်အဘို့, သူတို့ကများစွာသောအခြားအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်ထက်အများကြီးလျော့နည်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါဟာလျော့နည်းလျှပ်စစ်မီးအထူးသဖြင့်ကျောက်မီးသွေးပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့အပင်ဘုံများမှာဘယ်မှာဒေသများရှိသူတို့အားလုပ်ကိုင်ရန်ထုတ်လုပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်, နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအနေဖြင့်အနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ဆိုလိုသည်။ CFLs မတူဘဲ, သူတို့အဘယ်သူမျှမပြဒါးဆံ့။ သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ရှည်သောအသက်၏, သူတို့ကလည်းအစိုင်အခဲစွန့်ပစ်မှုကိုလျှော့ချ: သင်တစ်ဦးကို LED နဲ့အက်ဒီဆင်တီထွင်မီးသီးကိုအစားထိုးလျှင်, သင်ပြင်သို့ပစ်လိုက်ခြင်းကိုခံများထံမှငါးဆယ် 1000 နာရီအက်ဒီဆင်တီထွင်မီးသီးတားဆီးပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သူတို့အနည်းငယ်သာအပူထုတ်လုပ်ရန်နှင့် HVAC နှင့်ဆက်စပ်သောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအမေရိကန်ဦးစီးဌာနကိုနောက် 15 နှစ်ကျော်အယ်လ်အီးဒီ၏တိုးမြှင့်မွေးစားလည်း 62 ရာခိုင်နှုန်းကအလင်းရောင်ကနေလျှပ်စစ်မီးတောင်းဆိုမှုများကိုလျှော့ချကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု၏ 258 သန်းမက်ထရစ်တန်ချိန်တားဆီးများနှင့် 133 အသစ်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အယ်လ်အီးဒီ dimmers နှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်သလား?
အများအားဖြင့်, ဟုတ်ကဲ့။ အတော်များများကအယ်လ်အီးဒီအထူးသ dimmable အဖြစ်စာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ တချို့ကအလင်းမှိန်ခြင်းစနစ်များကိုအခြားသူများထက်ပိုကောင်းတဲ့အယ်လ်အီးဒီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, ဒါကြောင့်လုံးဝ re-ဆီမီးခွက်တစ်ဦးအာကာသမတိုင်မီတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မဟုတ်သူတို့လုံးဝပူးတွဲလျှင်။ မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ LED ဘို့အလို့ငှာ, သူတို့ allo မှ non-ပူးတွဲကရိယာအတွက်ဖြစ်ရပါမည်
Adress: 3rd ကြမ်းပြင်, D ကိုအဆောက်အဦ, 12 # Jinyuan ပထမဦးဆုံးလမ်း, Heao, Henggang, Longgang ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်
သြစတြီးယား stadi များအတွက် lignting MIC 720w ရေလွှမ်းမိုး ...
© Copyright - 2010-2018: အားလုံးအခွင့်အရေး။ pcb ပရိသ